Alahady 15 Aogositra 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady fahatelo, fitondrana am-bavaka ny « aumônerie nationale »
« Fa famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara » OHA 14 : 22b
RASOLONJANAHARY Fidy ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy no nitarika. Ramatoa RAMINO Vololona no nitondra ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia endriny fahatelo no narahina.
Ho fiderana an’Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra Azy dia niarahana namaky teo am-pitsanganana ny Salamo 145 : 1-7 hoe : « Hanandratra Anao aho, ry Andriamanitro Mpanjaka ô ! sy hankalaza ny Anaranao mandrakizay doria. Hankalaza Anao isan’andro aho sy hidera ny Anaranao mandrakizay doria.
Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra ; ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin’izay mandimby azy sy hanambara nya sanao lehibe. Ny lazan’ny voninahitry yn fiandriananao sy ny asanao mahagaga no hosaintsainiko. Ny herin’ny asanao mahatahotra no hotenenin’ny olona. ; ary ny fahebelibiazanao no holazaiko. Hanonona ny fahatsiarovana ny haben’ny fahatsaranao izy sy hihoby ny fahamarinanao ». Nohiraina ny FFPM 8 « Dera laza, hery haja ». Nisy vavaka fiderana.
RAJAONARIVELO Yasmina mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K7 no nitarika izany. Nivavaka izy. Ny andinin-tSoratra Masina nindramina dia : « Ary Andriamanitra nanao hoe : Aoka ny tany hamoaka zava-manan’aina samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady na mikisaka ary bibidia, samy araka ny karazany avy ; dia nisy izany. » Ao amin’ny GEN 1 : 24. Nazavaina tamin’ny tantara fohy izany Tenin’Andriamanitra izany. Nisy ankizy maromaro tany an-tsaha nanao ankamantatra niaraka tamina rangahy be iray. Tia sôkôla ity ngahy be ity ary izay mahavaly ny ankamantatra izy dia omena izany. Teo amin’ny fanontaniana voalohany dia efa voa i dadabe satria nolazainy fa avy amin’ny atody no niforonan’ny akoho. Tamin’ny ankamantatra faharoa dia mbola voa ihany ikaky be satria nolazainy fa avy amin’ny tany no niforonan’ny hazo. Tamin’ny farany dia tezitra dadabe fa nolazaina ho diso avokoa ny valiteniny. Nazavain’ny ankizy taminy fa avy amin’Andriamanitra no niforonan’ny zavatra rehetra. Araka izany tantara fohy izany dia hita fa na aiza na aiza misy antsika dia tokony hizara ny Tenin’Andriamanitra isika.
Nivavaka RAZAFINDRABE John Bam. Noredonina ny FF 39 : 1 « Faniriako ». RAFIDISON Fara no namaky misesy ny perikopa voalahatra : OHA 14 : 22-27 ; LIO 18 : 18-30 ; II KOR 9 : 6-15.
Ny Ohabolana 14 : 22b no niompanan’ny toriteny hoe : « Famindram-po sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara ».
Haseho anio ny vokatry ny asa tsara rehefa nazavaina nandritra ny alahady roa ny asa tsara sy ny olona manao asa tsara. « Famindrampo sy fahamarinana no ampanantenain’ny Tompo ho an’izay manao asa tsara ». Eo anatrehan’ny Tompo dia misy valiny avokoa ny fisasarana rehetra.
Ny famaliana ireto fanontaniana ireto dia manosika antsika hanao dingana lehibe :
Manambara inona amin’ny fiainana ny famindrampo sy fahamarinana ?
Midìka ho fitiavana sy fihavanana ny famindrampo sy fahamarinana araka ny dikan-teny iombonana (DIEM) raha fanambinana no heviny ao amin’ny Baiboly katôlika. Araka izany, eo amin’ny fiainana dia manambara Fitiavana, fihavanana ary Fanambinana ny famindrampo sy fahamarinana.
Inona no hevitra miavaka omen’ny Ohabolana amintsika raha miteny hoe « asa tsara » ?
Ao amin’ny Ohabolana dia misy hevitra miavaka mahakasika ny fanaovana ny asa tsara, dia ny fisainana ny hanao asa tsara. Mila mikasa sy mihevitra ny hanao asa tsara isika araka ny ao amin’ny FIL 2 : 13 hoe : « Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony ». Asa tsara, asa marina, asa tsy misy hosoka sy asam-pamonjena no takiana amintsika.
« Ny vavolombelona marina mamonjy ain’olona ; fa izay mamoaka lainga dia tena fitaka » OHA 14 : 25
Miseho amin’ny endriny maro ny lainga. Misy famaritana dimy mahakasika izany azo omena :
– ny olona mamitaka, milaza zavatra tsy marina ka ny teny no amboarina hahasarika ny hihaino ;
– ny atsangana tsy aman’orana ;
– ny lainga « masina » ;
– ny tsi-fampisehoana ny marina manontolo ;
– ny lainga mihaja.
Asa tsara sy asa marina no andrasan’nyTompo amiko sy aminao.
Nisy vavaka setrin’ny toriteny sy fifonana. Notolotry ny mpitarika ny Teny famelan-keloka hoe : « Aza matahotra hianao, fa efa nanavotra anao Aho, efa niantso ny anaranao Aho, Ahy hianao… Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Koa miverena Amiko, fa efa nanavotra anao Aho… Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very » (ISA 43 : 1 ; ISA 44 : 22 ; LIO 19 : 10). Nohiraina ny FFPM 141 : 2 ;5 « Efa resy izao na dia ny fasana aza ». Ho fanambaran’ny Fiangonana ny finoany dia niarahana nanonona ny fanekem-pinoana laharana fahatelo.
Manome fihenam-bidy ho an’ny zanaky ny Fiangonana hanjifa fitaovam-pianarana ny trano fivarotam-boky ANTSO dia, izay maniry hisitraka izany fihenam-bidy izany dia mila mitondra fanamarinana.
Ny solontenan’ny Fiangonana notsofin-drano tamin’ny heriny dia manao Tafika Masina any Bevoay.
Ny Mpitandrina mivady dia any amin’ny Synoda Lehibe any Sambava.
Ny SAMPATI dia manatontosa lasy lehibe.
Manomboka ny asa fanorenana ny « trano atsimo » : ho fandaminana dia azo ampiasaina ny trano fidiovana ao amin’ny Akany.
Sabotsy 28 aogositra 2021 : kasaina hatao ny « randonnée pédestre » ao anatin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha-160 taonan’ny Fiangonana eny Alasora, mila misoratra anarana any amin’ny komity
Sabotsy 4 septambra 2021 : kasaina ho tanteraka ny eny amin’ny zaridainan’Andohalo ny tontolo andro fanatanjahantena
Alahady 26 septambra 2021 : kasaina ho tontosa ny ny fahalalana Soratra Masina karakarain’ny Vaomieran’ny Aim-panahy.
Rehefa izay dia nandray fitenenana ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra nisaotra Fiangonana amin’ny fanohanana ireo mpiantafika lasa any Bevoay ary nanentana mba hitondra azy ireo amim-bavaka sy ny fizotry ny Synoda Lehibe. Mila fanohanana ihany koa ny tafika masina izay ho tanterahina any Ambohipiara.
Ireo mpianakavin’ny finoana nisaotra an’Andriamanitra fa : nahatratra tsingerintaona nahateahany sy afaka CEPE ; nahazo valim-bavaka, misaotra ny Tompo noho ny fahavitan’ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra boky sy tohan-kevitra. Misy koa mangataka famelan-keloka sy ny fitantanan’ny Tompo ny fiainany. Ireo hira nangatahina sy nataon’ny Fiangonana dia ny : FFPM 12 : 3 « Jehovah ô ! derainay Ianao » ; FFPM 539 : 1 « Faly dia faly izahay mpanomponao » ; FF 46 « Mba tantanonao, ry Raiko ; Antema 16 « Isaoranay Jehovah Tomponay ». Natolotra teo am-pitsanganana ny rakitra tamin’ny hira vavaka FFPM 512 : 1 « He Mahatoky aho Tompo ».
Nanao anjara hira ny Sampana Tanora Kristiana, izay nitohy tamin’ny vavaka fangataham-pitahiana.
Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitarika izany. Nisaotra izy noho ny mbola afahana mangata-bavaka amin’Andriamanitra. Nisaorana ny hafatry ny toriteny fa torolalana tsara ho an’ny Fiangonana hahafahana manavao fanolorantena amin’ny fanaovana asa tsara. Nentina amim-bavaka ny fiandrasana ny valim-panadinana « baccalauréat » ; ny asan’ny Fiangonana, ny Synoda Lehibe, ny « aumônerie nationale », ny fitandremana Amparibe Famonjena sy ny rafitra mijoro rehetra ; ny Tafika Masina. Tsy diso anjara tamin’ny tonombavaka ireo sahirana, ny tsy salama, ny mana-manjo, ny mpitondratena sy kamboty ; ny tokantrano tsirairay sy ny mpanompon’Andriamanitra rehetra ; ny zanaky ny fiangonana rehetra any am-pielezana ; ny firenena malagasy mba hanana mpitondra hendry, hisian’ny filaminana ny firenenay ary ho voaaro amin’ny areti-mandringana izahay. Ao koa ireo miandrandra fiainam-baovao. Notohizana tamin’ny vavaka mangina izany vavaka izany ary nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra ».
Nohiraina ny FFPM 545 : 1 « Endrey izany hafaliana » Notononina ny tondrozotra 2021. Natolotra ny tsodrano. Ny andininy faharoa sy fahatelo amin’ny hira farany no natao nofaranana tamin’ny Amen hiraina sy trinite. Ny feonkira fanevan’ny faha-160 taonan’ny Fiangonana dia nalefa teo am-piravana ary ny tonony kosa navoaka teo amin’ny fafana.
Nitendry orga : RANAIVOSON Jacky
Nandray an-tsoratra ny fotoana : ZANARITSIMBA Toky